Ha u ogolaan Cigna inuu ku baxsado Dilka | Martech Zone
Ha u ogolaan Cigna inuu ku baxsado Dilka
Sabtida, Diisambar 22, 2007 Sabtida, Diisambar 22, 2007 Douglas Karr
Ku Naso Nabada, Nataline.
Haddii aan waligaa laguu diidin waxtarrada, lagugu xirin heshiis caymis, ama aadan maqal qof leh - waxaad tahay qof nasiib badan! Warshadaha caymiska ayaa ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan Mareykanka. Xisaabtu way fududahay, in ka badan dadka ay sii daayaan ha dhintaan - ayaa ka sii fiicnaanaya macaashka.
Miyaan tan ku beddeli karnaa kan Internetka iyo barta internetka? Miyaan macno ahaan u duqeyn karnaa makiinadaha raadinta farriimaha Nuugista Cigna oo isbadal sameeya? Waxay ku andacoodaan inay ku jiraan meherad daryeel. Taasi ma runbaa? Daryeelka miyaanay dhab ahaan ku bixin lacag ka badan tan aan daryeelin? Waxaan aaminsanahay inay Dhakhaatiirtu daryeelaan, laakiin shirkadaha caymisku waxay leeyihiin dhiirigelin ka soo horjeedda.
Warqad Dec. 11 ah, afar dhakhtar ayaa ka codsaday caymiska inuu dib uga fiirsado. Waxay yiraahdeen bukaanada xaaladooda lamid ah ee lagu tallaalo qalliinka waxay leeyihiin heerka badbaadada lixda bilood ee qiyaastii 65 boqolkiiba.
Cigna wuxuu sheegay inay ahayd mid tijaabo ah oo aysan daboolin siyaasadooda.
Nataline Sarkisyan hadda waa dhimatay ka dib seddex sano oo uu la dagaallamayay cudurka leukemia isla markaana loo diiday in la beero oo loo baahdo shirkaddeeda Caymiska, Cigna.
Tani ma ahan wax ka hooseeya dilka darajada koowaad indhahayga. Loo shaqeeye shaqaalihiisa ku waaya duruufo shaqo oo aan badbaado lahayn awgood waxaa lagu soo oogi karaa dil ama dil qalad ah, maxaa diidaya in shirkadda Caymiska loo sameeyo? Cigna iskama indha tirin xaaladda, way falanqeeyeen waxayna sameeyeen xulasho miyir leh oo ay uga tagayaan bukaanka inuu dhinto.
Sheekooyinkaan labadaba waa xanaaq iyo cabsi. Haddii aad saami ku leedahay Cigna ama xitaa Iskuduwaha Miisaaniyadeed ee ay ku jiraan Cigna, waxaan kugu boorin lahaa inaadan taageerin shirkad noocaas ah. Waxaa la joogaa waqtigii shirkadaha caymiska ay ka joogsan lahaayeen inay jeebbada ku xirtaan dhiiga dadka aad u bixiya.
Inbadan oo kusaabsan halganka Nataline:
Nataline way dhimatay, ceeb ayey u tahay Cigna
Cigna wuxuu dilaa Nataline
Nataline waa dhimatay
Kooxda Maamulka Sare ee CIGNA - sidee u seexdaa habeenkii?!
H. Edward Hanway, Guddoomiyaha iyo Sarkaalka Sare ee Fulinta, Shirkadda CIGNA
Michael W. Bell, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta iyo Madaxa Sarkaalka Maaliyadeed, Shirkadda CIGNA
David M. Cordani, Madaxweyne, CIGNA HealthCare
Paul E. Hartley, Madaxweyne, CIGNA International
John M. Murabito, Madaxweyne Kuxigeenka Fulinta, Shaqaalaha iyo Adeegyada, Hay'ada CIGNA
Carol Ann Petren, Madaxweyne Kuxigeenka Fulinta iyo La Taliyaha Guud, Shirkada CIGNA
Karen S. Rohan, Madaxweyne, CIGNA Group Insurance iyo Madaxweyne, CIGNA Ilkaha & Daryeelka Aragtida
Michael D. Woeller, Madaxweyne Ku-Xigeenka Fulinta iyo Madaxa Sarkaalka Warfaafinta, Shirkadda CIGNA
Tags: qoraagaMuujinta XogtaSuuqgeynta CaalamkaJascha Kaykas-WolffMindjetUrurka
Qaar ka mid ah Kaftanka la-tashiga… Qaadada iyo Xarigga
Beddelka Weyn iyo Bluelock
22, 2007 at 12: 00 PM
Doug: Waxaan kaliya daawaday "Sicko" shalay. Cabsi.
22, 2007 at 2: 03 PM
Qaybta cabsida leh aniga ayaa ah tan - shirkad caymis oo waddankan ka jirta ayaa awood u leh inay beeniso sheegashooyinka ah in dhakhtar ku adkaysto inuu dheereyn doono ama badbaadin doono nolosha.
Ganacsi sameynta go'aan nolol ama geeri waa inuu noqdaa mid sharci darro ah. Bannaan oo fudud.
22, 2007 at 6: 21 PM
Haa, waa cabsi, laakiin waa run muddo dheer. Dhacdada oo dhami waa wax yar oo macquul ah: Dadka qaar waa inay dhintaan maxaa yeelay xubin deeq bixiye ah oo keliya lama heli karo. Halkan sida muuqata waxaan ku helnay kiis meesha mid ka mid ah, wayna heli weyday.
Ama waxay u badan tahay, way lahaan lahayd, laakiin markaa intiisa kale ee qoyskeeda waxay u badan tahay inay qalin ku iibiyaan waddada ka dib markii kheyraadkoodii la gubay. Taasina waa sababta ay ugu maleeyeen inay leeyihiin caymis. Waxbaa xaqiiqdii ku qaldan sawirkan…
22, 2007 at 7: 11 PM
Wanaagsan inaan halkan kugu arko waxaan rajeynayaa inaad sifiican usocoto.
Si fiican u dhig.
Waxaan rajeynayaa inaan ku dabaqi karno cadaadiska lagama maarmaanka u ah sharci dejisteena inay uga tagto daryeelka bukaanka meesha ay ku habboon tahay - dhaqtarka oo aan ka ahayn shirkadda caymiska.
22, 2007 at 6: 48 PM
Dhibaatadu waxay tahay in shirkadaha caymiska caafimaadka qadka ugu hooseeya ay kuxiran YAHAY bixinta dheefaha. Tani waa waxa aan la kulmay markii aan isku dayay inaan helo oggolaanshaha daawada wiilkayga. Wuxuu ogolaansho ka helay Zyrtec-D, oo ahayd daawo aan qaacido lahayn 2004 markuu dagaalku bilaabmay. Ma aanan sameyn Labadayaduba waxaa nalagu qoray isla dawada ADHD. Aniga ayaa la ansixiyay; tiisa ma ahayn. Lama ansixin illaa sanadkaan, markii Zyrtec-D loo oggolaaday iibka OTC? Isku mid ahaansho? Adiga ayaa go’aansanaya.
Sheekadeennu way yar tahay marka tan la barbardhigo, laakiin mabda'a wali wuu hayaa. Waxay qariyeen ku-tallaalida dhuuxa lafta iyo daryeelka kadib maskaxdooda, waxay ka soo baxeen waajibaadkoodii ahaa inay oggolaadaan wixii daaweyn dheeraad ah oo qaali ah ee gabadhan. Waxaan ka shakisanahay in codsigu markii hore gaadhay qof la garan karo (fiiri qoraaladayda ku saabsan dhakhtarka gaashanka jirka ee ansixiya daawooyinka dhimirka, tusaale ahaan), markaa way fududayd in la yiraahdo maya. Xitaa ka dib markii afarta dhakhtar rafcaan qaateen, way beeniyeen.
Michael Moore wuxuu leeyahay xuquuqdan badan: Ku ridida go'aamada caafimaadka qof kasta oo aan ahayn dhakhtarka bukaanka waa khalad. Iyo waxa loogu yeero 'dhakhaatiirta' Cigna kaliya waa inaan weydiiyaa sida ay isugu waafajinayaan dhaartooda Hippocratic iyo diidmada ay saxiixeen.
22, 2007 at 7: 18 PM
Sida laga soo xigtay Forbes, H Edward Hanway wadarta guud ee magdhowgu waa $ 28.82 milyan halka 5 sano uu yahay $ 78.31 milyan. Hanway wuxuu 6 sano maamule ka ahaa Cigna (CI) wuxuuna shirkada la joogay 28 sano.
Taasi waa sida uu u heshiisiiyo.
25, 2007 at 2: 21 PM
Nasiib darro inteenna Ameerikaanka ahi waxaynu dhex marnaa dufan, carrab la 'iyo farxad. Waxaan ka aqrinay masiibooyin sidan oo kale ah waxaana u maleyneynaa inaysan ku dhici doonin aniga ama qoyskeyga. Waxaan isku dayeynaa inaan muhiimaddeeda hoos u dhigno fikradaha sida "waxay ku dhex dhacday daloolka" ama "iyaduba way dhiman lahayd". Saxaafaddeena ayaa ku guuldareysatay inay si sax ah u baarto oo ay uga warbixiso waxqabadka xun iyo fal dambiyeedyada shirkadaha caymiska maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah caymiska ayaa sidoo kale bixiya kafaala qaadayaasha. Waxaan haynaa weriyeyaal sida John Stossel oo u jilciyaya Michael Moores filimka Sicko dhawr bilood uun ka hor dhimashadii Natalines.
Ilaa aan dhammaanteen ka wada xanaaqno oo aan si dhab ah u yeerno, warqad qorno oo aan u muujino xanaaqayaga, dhaqamadaan ayaa sii socon doona. Ku dheh qalinkaaga, afkaaga iyo buugga jeebkaaga.
La xiriir congresskaaga. Email u soo dir wariyeyaasha aan runta sheegin. La xiriir oo ku hanjabo inaad qaadacayso shirkadaha ku xayeysiiya barnaamijyadan wararka.
26, 2007 at 9: 10 AM
Waxan oo dhami waxay keeneen su'aalo dheeraad ah markaa aniga ayaa jawaabo ii ah
Wixii aan ka akhriyey, haddii ay heshay tallaalkeeda waxaa laga yaabaa inay ku sii nooshahay lix bilood oo dheeri ah. Xaqiiqdii ma noolaan lahayn wax intaas ka badan intaas. Waxay qabtey xanuun aan la soo koobi karin.
Waxaan dareemayaa qoyska. Laakiin maaha mid la jaray oo qalalan sida qaar ka mid ah warbixinnada warbaahinta ay rabaan inay ka dhigaan. Haddii ay ahayd arrin ay iyada daaweyntan u helayso oo ay sii noolaanayso 20 sano oo dheeri ah - waa wax aan caqli gal ahayn Laakiin helitaanka xubinta taranka, waxay uga baahnaan lahayd iyada inay hesho xoogaa daawo diidmada ah… taas oo qaadan lahayd nidaamkeedii hore ee daciifka ahaa oo uga sii dari lahayd… taas oo ka dhigi lahayd in kansarku sii faafo. IYO kansarku wuxuu ahaa terminal markii hore.
Aniguna waxaan dhex marayaa dagaal aniga ii gaar ah oo aan la galayo shirkadaha caymiska caafimaadka. Marka waan ogahay inay hoos u dhici karaan sax aan macquul ahayn. Sheegashadayduna waa kaliya dhowr boqol oo doolar… meelna ugama dhowaan lixda tirooyin ee sheegashadani ay ku meeraysaneysay.
26, 2007 at 9: 34 AM
Waan hubaa inay jiraan qaybo badan oo maqan, laakiin gunta aniga waxay ahayd in dhakhaatiirta qaarkood iyo kalkaaliyayaasha caafimaad ay codsadeen daaweynta oo ay diidmada qayaxan ku dileen shirkadda caymiska. Waa inaan hubinaa inaysan taasi dhicin.
Nasiib wacan dagaalkaaga! Waxaan ahay mid ka mid ah 'caymis la'aanta' badan ee dalkan - Aad ayaan u buurnnahay oo keligay ma heli karo. (Ilmahaygu waxay kujiraan siyaasadooda).
26, 2007 at 10: 16 AM
Waxaan ku kalsoonahay dhakhaatiirta sida aan ugu kalsoonahay shirkadaha caymiska.
Miyaanad codsan lahayn awoodda aad ku qaban karto wax jeebkaaga ku ridi kara lacag lacag ah oo doonta saaran?
Tani waa sababta aad uga dacwoon kartaa garqaade dhinac saddexaad ah go'aannada la diiday. Marka qof ah:
A. Wax saameyn ah kuma yeelan shucuurta qoyska.
B. Wax saameyn ah kuma lahan xarigooda hoose (wuxuu u socdaa caymiska iyo dhakhaatiirta)
Wuu gaari karaa go'aanka ugu dambeeya.
Maaha wax kadis ah in dhakhaatiir badani ay yihiin milyaneero iyaga u gaar ah.
Marka mawduuca, ma waxaad dhihi lahayd waxaad taageertaa daryeelka caafimaadka guud?
26, 2007 at 2: 12 PM
Waan ku faraxsanahay inaan ogaado in yar oo dhakhaatiir ah waana murugo markaan arkay sida shirkadaha caymisku u saameeyeen. Mid ka mid ah asxaabteyda ayaa lagu riixay inuu 'waqti yar la qaato' bukaan kasta si loo wanaajiyo 'wax soo saarkiisa'. Waxa kale oo aan arkay isaga oo 1/3 mushaharkiisa ku bixinaya caymiska xumaanta (warshad kale oo faa iido leh).
Waxa kale oo uu lahaa inuu ku biiro koox dhakhtar halkii uu ka heli lahaa meherad u gaar ah maxaa yeelay ma jirin hab uu kula sii wadi karo waraaqaha caymiska. Kani wuxuu ahaa qalbi jabiye maxaa yeelay wuxuu ahaa Dhakhtar cajiib ah umana qalmin in lala jaanqaado daryeelka caafimaad ee khadka wax soo saarka.
Waxaan u maleynayaa inaad ogaan doonto in inta badan Dhakhaatiirtu aysan aheyn milyaneero in ka badanna ay ka tegayaan daryeelka bukaanka sababtoo ah dhammaan waxyaabaha ay ka qabanayaan. Waa fowdo.
Waxaan ku noolaa Kanada muddo 6 sano ah runtiina waan taageeraa daryeelka caafimaadka guud (aad baan uga argagaxsanahay barbaarintayda muxaafidka ah). Sababta waa mid fudud - Waxaan aaminsanahay in dawadu ay tahay arin bulshada la xiriirta, ma ahan ganacsi… in kasta oo Mareykanka aan ka dhignay ganacsi BULSHO leh.
Kanada waxay leedahay caqabado, waan qirayaa. Sheekooyinka naxdinta leh ee aan halkaan ka maqalno waa yar yihiin, waana u dhexeeyaan, in kastoo.
Waxaan rumeysanahay inay jirto faa iido ganacsi oo weyn daryeelka guud ee caafimaadka sidoo kale - dadku kama baqaan inay bilaabaan ganacsigooda marka aysan ka walwalin daryeelka caafimaad ee qoysaskooda. Dadku kama sii cabsanayaan inay ka tagaan shaqooyinka xun, sidoo kale, taasoo horseedaysa xaalado shaqo oo hagaagsan.
Waxaan si dhab ah u maleynayaa inay tahay talaabo kor loo qaaday. Si kastaba ha noqotee, haddii aad bixin karto Maamulaha Caymiska $ 28 milyan sanadkii, waxaa jira fursad qaar ka mid ah loo hagaajiyo, sax?
26, 2007 at 2: 17 PM
Nope. Haddii aad aragto inaad siineyso dowladda 33% DAD ka badan dakhligaaga caymiska… horay u sii soco. Laakiin sida ay hadda tahay… Waxaan ku bixiyaa qiyaastii $ 250 / bishii caymis caafimaad oo buuxa (aad u fiican). In kasta oo cida aan u shaqeeyo ay bixiso wax badan oo intaas ka badan. Laakiin taasi waa qayb ka mid ah shaqaalaynta dadka wax horumariya.
26, 2007 at 2: 28 PM
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah inaan horey u bixinay taas, in kastoo, ck. Marka qof aan ceymis laheyn la daaweeyo, waxaad ku bixineysaa canshuur iyo qiimo koror caafimaad, iwm. Waxaan horeyba u bixinay daryeelka guud ee caafimaadka… laakiin waa kaliya daaweyn - ma ahan daawo kahortag ah.
26, 2007 at 4: 24 PM
Iyadoo la tixraacayo faallooyinkaaga in Nataline ay lahaan lahayd lix bilood iyada oo la adeegsanayo qalliinka - khaldan. Qalliinka la'aantii, waxay ku siin lahaayeen lix bilood bannaanka. Qalitaanka dhuuxa lafta ayaa ku guuleystay inuu ciribtiro cudurka leukemia laakiin qiimaha wuxuu ahaa dhaawaca beerka oo aan laga soo kaban karin. Haddii ay heshay tallaalista, waxay lahayd rajo nolol buuxda. La’aanteed, iyadu waa halaag.
Nidaamka ayaa gabi ahaanba jabay markii dhakhaatiirtu aysan mar dambe awood u lahayn inay noqdaan dhakhtar. Haddii aadan ku kalsoonayn iyaga, waxay u badan tahay inay tahay inay ku dhaqmaan daawo difaac ah halkaas oo ay ku qancinayaan caymiska, bukaanka isla markaana ay u socdaan qadka khataraha mas'uuliyadda caymiska, sidoo kale.
Hagaajinta nidaamka waxay ka dhigan tahay in la xadido abaalmarinta waxyeellada cillad-darrada iyo sababaha dacwadaha mas'uuliyadda, xaddididda macaashka caymiska iyo ku celcelinta ku-dhaqanka daawada gacanta dadka waawayn ee ka bixiyay $ 100K waxbarashadooda dhakhtar ahaan. Runtii waa inaad akhridaa taxanaha Dr. Kirschenbaum ee Dhakhaatiirta, Lacagta iyo Daawada si aragti ka duwan looga helo. Halkaan.
26, 2007 at 4: 58 PM
Wax kasta oo aan akhriyay waxay umuuqdeen inay tilmaamayaan hadaf beerka laga bedelayo waxay ahayd 65% fursad ah inaan noolaado lix bilood oo kale.
Hadda sida qoraalkeygii ugu horreeyay sheegay, haddii tani ay nolol ka dhigi lahayd 20 sano oo kale oo suurtagal ah… dhammaantood waa. Laakiin haddii ay lixda bilood tahay… Uma boodi doono iyo hoos midkoodna labada go'aanba. Oo waxay u maleyneysaa in garqaadeyaasha saddexaad uu yahay xal sax ah.
In kasta oo arimahoodu yihiin, uma maleynayo in hagaajintu ay tahay daryeel caafimaad oo caalami ah, taasi oo culeyska u weecineysa dowladdeena oo ay nuugaan.
Xal u heliddu waa, sidii aad ku tilmaamtay inaad xaddidayso cillad-xumada iyo xeerarka kale. Laakiin dhab ahaantii kuma dhejin doono maaraynta caymiska caafimaadka kuwa sida Hillary Clinton oo kale. Si saraaxad leh, u hel arimo ku filan halka lacagteyda canshuuraha ay ku baxdo… uma baahnid inay ku bixiso 'arrimaha caafimaadka' sida shaqooyinka sanka.
26, 2007 at 8: 07 PM
Ku qor maqaal Associated Press at http://ap.google.com/article/ALeqM5hFp8DsNC_gJwb9q72kNfDiZCioSwD8TM2SAO1, Dhakhaatiirta ka socota UCLA ayaa laga soo xigtay inay sheegayaan "… bukaanada xaaladaha la midka ah kuwa Nataline ee lagu sameeyo qalliin lagu tallaalo waxay leeyihiin heerka badbaadada lixda bilood ee qiyaastii 65 boqolkiiba."
Waxa aan fahamsanahay in loola jeedo waa inay yeelanayso boqolkiiba 65 fursad ay ku sii noolaato 6da bilood ee ugu horreysa, mana aha, sidaad xustay, inay sii dhimanayso markay tahay 6 bilood. Waxay qabtey xanuun aan la soo koobi karin sababtoo ah waxay qabtey shaqo joojin beerka ah oo ay sababtey daaweynta cudurka leukemia. Fahamkaygu waa haddii ay ka dhigto 6 bilood, waxay heli lahayd fursad kasta oo ay uga dhigto dhawr sano oo dheeri ah.
Waxay si daacadnimo ah iigu muuqataa qoraaladaada inaad aaminsan tahay in daryeelka caafimaad ee wax fiican qaban kara ay tahay oo keliya in la heli karo kuwa awood u leh, iyo in qof kasta oo kale uu ka fiican yahay inuu dhinto. Waan ku raacsanahay qodobbadaada iyo talooyinka badan; Waxaan u maleynayaa in heshiisiinta dhinac saddexaad ay tahay fikrad wanaagsan, gaar ahaan haddii ay deg deg tahay, laakiin aragtidaada aad ka qabtid "laga yaabee inay sidoo kale dhimato, iyadu si kastaba ha noqotee" waxay u muuqataa inay tahay mid xamaasad leh. Waxay ku siinaysaa aragti ah inaad adigu keliya xiisaynayso naftaada oo aanad cid kale danaynayn.
26, 2007 at 8: 18 PM
Waxaan rabaa in qof walba uu noolaado oo uu helo caymiska caafimaadka, hase yeeshee uma maleynayo inay tahay meesha dowladda ay ka bixin karto sidoo kale.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko dowlad aad uga yar (ie, laga jaro IRS), ee kama badna.
Sideed u malaynaysaa inay aabbayaasheen aasaasayaashu sameeyeen? Jawaabtu waa in laga dhigo culayska dhakhaatiirta wax kayar (yacni sharciga ayaa ku habboon) oo yaan loo wareegin culayskaas cashuur bixiye kasta. Dawladeenu waxay cadeysay inay tahay mid aan caqli gal ahayn waana inaan lagu aaminin nolosheena caafimaad sidoo kale. Iyaga oo mas'uul ka ah, kiisaska sidan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwo caan ah, oo aan caadi ka ahayn. Kaliya fiiri tirooyinka wadnaha oo istaaga iyo heerarka ka badbaada kansarka kuwa qaba kansarka. Daawada gaarka loo leeyahay ayaa waxtar badan leh.
Laakiin sida ay tahay kiiska taagan, aan mar kale idhaahdo .. haddii saadaashu ay ahayd mid suuragal u ah nolol dheer kadib qalliinka… markaa aniga ayaa dhan u ah. Laakiin waan aqriyay bayaanka aad tilmaamtay sida xun.
Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan arko qoraal sifiican loo qoray, kaliya xaqiiqada qaabka maqaalka
Tani ma aha mawduuc sahlan mana aha inuu noqdo mid lagu qaado doodo shucuur leh. Kaliya xaqiiqooyinka m'am.
Jan 10, 2008 at 1: 35 AM
Xaqiiqadu way fududahay, Cigna ma rabto inay qarash gareyso si loo daaweeyo jirro, isla Cigna Glendale ayaa tan ku sameysay Qoyskan, waxay kula dagaallameen si kasta oo ay kari karaan, kaliya si ay u ogaadaan in Hay'adaha Dowladdu ay dadkan u oggolaadaan inay ku xad gudbaan macaamilka, waxna ma jiraan waa la qabtay. Waa la daboolay.
Xildhibaan ka tirsan Valencia, California Qoraa
Congressman ayaa qoray: Warqad ku taariikheysan May 30th 1996 XNUMX Waaxda Shirkadaha. Nuqul warqad ah oo la siiyay Jo Joshua Godfrey.
Mudane Bishop Commissioner,
Waxaan qorayaa anigoo ku hadlaya magaca xubnahayga Josephine Joshua Godfrey kuwaas oo dhibaatooyin adag kala kulmay California shati HMO, daryeelka caafimaadka CIGNA.
Mrs Godfrey waxay dajisay CIGNA waxay ku fashilantay inay si sax ah u ogaato una daweeyso kansarka sanbabadeeda intii u dhaxeysay March 1993 ilaa Ogosto 1994. Sida muuqata sanad kadib dhaqaatiirta aan Cigna aheyn waxay si fudud ku ogaadeen burooyinka Carcinoid ee ku jira sambabka bidix waxayna u sheegeen Mrs Godfrey in Buroda ay aheyd in la ogaado horaantii 1993. In kasta oo diidmada soo noqnoqota ee jiritaanka burooyinka laga helay CIGNA, burooyinka ayaa ugu dambeyntii laga saaray ST. Isbitaalka Josephs ee ku yaal Burbank California. Cudurka dabaysha ee qalliinka ka dib wuxuu soo sheegayaa in burooyinka ay "si buuxda u koray oo si buuxda u bislaaday."
Intii ay baareysay GIGNA Mrs Godfrey waxay si isdaba joog ah u codsatay in loo gudbiyo dhakhtar takhasus leh si loogu daweeyo. Sababo aan la fahmi karin ayaa GIGNA u diiday inay la tashato takhasusle si ay u hesho daaweyn habboon oo caafimaad. CIGNA waxay sidoo kale diiday inay sii deyso diiwaanka caafimaad ee Mrs Godfrey si dhakhtar kale uu dib ugu eego taariikhdeeda caafimaad una amro daaweynta. Kaliya kadib daraasiin codsi ah ayaa la siidaayay diiwaanka. Hase yeeshe, Mrs Godfrey waxay aaminsan tahay si looga ilaaliyo CIGNA dhaqan xumada dukumiintiyada si xun loo beddelay.
Gobolka Kaalifoorniya ayaa leh masuuliyadda ilaalinta macaamiisha ka diiwaangashan HMOS. Gobolka waxaa looga baahan yahay inuu wax baro oo u wargeliyo macaamiisha wax ku saabsan HMOS. In kabadan 12 milyan oo reer Californians ah oo ku nool HMOS waxbarista iyo ku wargalinta macaamiisha tayada iyo helitaanka daryeelka caafimaad waa hawl muhiim ah. Nasiib darrose, haddii waayo-aragnimada Mrs Godfreys ay tahay tilmaan kasta oo muujineysa sida macaamiisha baahiyaha caafimaad ay ula dhaqmaan HMOS, waa inaan dib-u-eegis ku sameynaa nidaamka daryeelka la maareeyey. Koongarasku wuxuu bilaabay inuu baaro HMOS iyo tayada daaweynta caafimaad ee ay bixiyaan. Bukaanno badan ayaa rumeysan in HMOS ay si joogto ah ugu diidaan daryeelka iyo macluumaadka bukaannada si loo dhimo kharashyada. "Gag rule" muuqda ee ka mamnuucaya dhakhaatiirta inay soo jeediyaan daaweyn aan laga helin HMO sidoo kale waa walaac gaar ah.
Aniga Dastuurku maahan shaqsiga kaliya ee dhib kala kulmay la tacaalidda HMO.
(1) Ruth Macinnes ee San Diego waxay dhimatay markii dhakhaatiirta HMO ay ku guuldareysteen inay bixiyaan baaritaano caafimaad si loo ogaado loona daweeyo cudurada wadnaha ugana jawaabaan dhacdooyinka naxdinta wadnaha; -waxaa lagu ogaadey in kabadan hal sano. Waxaa la ii sheegay in sida dadkan oo kale ay jiraan kumanaan kale oo ku soo qulqulaya waddanka oo leh sheekooyin la mid ah.
Waxaan si xushmad leh u ixtiraamayaa in xafiiskaaga uu baaro sheegashooyinkaas, oo uu baaro in HMOS-ka Gobolka si sax ah loola socdo iyo macaamiisha la siiyo macluumaadka ay u baahan yihiin si loo hubiyo daryeel caafimaad oo tayo leh. Waxaan aaminsanahay in Mrs Godfrey si xun loola dhaqmay nidaam ay tahay inuu daryeelo iyada. Haddii xadgudubyada la soo bandhigo waxaan codsanayaa in tallaabo fulin ah laga qaado kuwa ka mas'uulka ah si xun ula dhaqanka macaamiisha. Baadhitaan dhammaystiran ayaa gacan ka geysan doona hubinta in gobolku uu guto waajibaadkiisa in ka badan 12 milyan oo macaamiisha HMO ah. Fadlan ugu jawaab Maamulaha degmadayda, Armando E. Araloza marka ugu horraysa ee aad fursadda hesho.
Jawaabta Waaxda Corp
Los Angeles, CA Jawaab »
JO JOSHUA GODFREY SHARE DADKA KALIFORNIYA IYO UMADAN:
WAAXDA SHAQOOYINKA JAWAABTA LOOGU TALAGALAY SHIRWEYNAYAASHA WARQAD TAARIIKH JULY 2ND, 1996
RE: Faylka Maya ALPHA
Waxaan ku jiraa rasiidka waraaqdaadii 30-kii Maajo, 1996, ee la helay bishii Juun 4, 1996, ee ku saabsan shaqsiyaadka kor ku xusan iyo qorshahooda adeegga daryeelka caafimaadka, Cigna Healthcare of California.
Waaxda Shirkadaha (? Waaxda?) Waxay maamushaa Cigna Healthcare iyo qorshayaasha kale ee adeega daryeelka caafimaadka iyadoo la raacayo Sharciga Adeegga Daryeelka Caafimaadka ee Knox-Keene (Xeerka Caafimaadka iyo Amniga 1340 et seq.) .) Waaxdu waxay qaadataa mid kasta iyo codsi kasta oo caawimaad ah (? RFA?) Aad ayaan u helnaa si dhab ah. RFA-yada ay heshay Waaxdu dib-u-eegis laguma sameynayo oo keliya marka loo eego arrimaha (shaqooyinka) shaqsiga ah, laakiin waxaa isha lagu hayaa dhibaatooyinka nidaamka ka imaan kara sidoo kale. Dib u eegista RFA waa cunsur muhiim u ah dadaalada guud ee waaxda.
Waaxdu waxay dib-u-eegis ku sameysay ama dib u eegis ku sameyneysaa dhammaan RFA-yada ay soo gudbiyeen qoyska Godfrey. Kiiskii Josephine Godfrey waxaa dib u eegay Qaybta Fulinta Qaybta. Dib-u-eegidgan waxaa ka mid ahaa, laakiin aan ku xaddidnayn, baaritaanka diiwaanka caafimaadka ee khuseeya, wareysiyo lala yeeshay shaqaalaha qorshaha, iyo wadahadal ballaadhan oo lala yeeshay qoyska Godfrey. Dib u eegistaan ​​awgeed, Qeybta Fulinta ayaa go'aamisay in Cigna ay si qancis leh wax uga qabatay cabashooyinka gaarka ah ee Mrs. Godfrey ayna soo saartay xeelado lagu xaliyo dhibaatooyinkaas.
Dhanka Christopher Godfrey's RFA, Cigna waxay ogolaatay inay yeelato (Magaca shaqsiyaadka laga saaray) RN oo ay siinayaan Mr iyo Mrs. Godfrey labadaba si ay uga caawiyaan isku dubaridka daryeelkooda haatan iyo xalinta wixii dhibaato ah ee ay la kulmi karaan. Labadaba RFA-yada ayaa hada xiran. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka ku jira kuwan iyo dhammaan RFAs ayaa lagu daray qawaaniinta socda ee Waaxda si loo hubiyo u hoggaansanaanta qorshaha caafimaadka ee Sharciga Knox-Keene.
Waaxdu waxay la wadaagaysaa dareenkaaga waxa loogu yeero? Gag? qodobbada qandaraasyada bixiyaha. Waaxdu waxay dhawaan ubaahantahay qorshe ay ku tirtirto qodob kujira qandaraaslayaasheeda taasoo ku waajibisay bixiyaha inuu qorshaha galiyo 'iftiin wanaagsan.? Wadahadalkii dhowaa ee lala yeeshay dhamaan rukhsadaha, waaxdu waxay ku sheegtay:? Dhakhtar kasta oo qandaraas qaata iyo xirfadle daryeel caafimaad oo kale waa inay awoodaan inay si daacadnimo leh uga hadlaan si sax ah arrimaha ku saabsan saamaynta ku yeelan kara caafimaadka bukaanka iyo rabitaankiisa si loo kobciyo xiriirka dhaqameed ee kalsoonida kalsooni ka dhexaysa bukaanka iyo xirfadlaha daryeelka caafimaadka.
Xiritaanka, waxaan jeclaan lahaa inaan markale ku nuuxnuuxsado sida Wasaaradda ay uga go'antahay malaayiinta reer Californians ee ka diiwaangashan qorshooyinka adeegga daryeelka caafimaadka. Haddii aad hayso su'aalo dheeri ah, fadlan haka waaban inaad la xiriirto Kaaliyaha Gaarka ah (Magaca Bidix) Daacadnimo,
KETH PAULU BISHOP
Jan 10, 2008 at 1: 42 AM
Sheekadan waxaan u qoray Sharci dejiyayaasha anigoo 14jir ah, waxaan rabaa inaan idinla wadaago.
Waxaan ahay 14 sano jir waxaanan ahay dhibane cillad caafimaad. Waxaan warqad ugu dirayaa Golaha iyo Guurtida maxaa yeelay waxaad u baahan tihiin inaad caawisaan dhibbanayaasha cillad-xumada caafimaad. Waan xanuunsanayay, madaxa ayaa i dhaawacay hooyadayna dhakhtar ayey i geysay. Waxa igu soo batay dhiig sanka ah iyo madax xanuun xun. Waxaan u maleynayaa in tani ay bilaabatay dhamaadkii 1992 ama horaantii 1993. Waxay dhaheen waan fiicanahay, waxaanan xasuustaa hal dhakhtar oo si xun ula dhaqmay aniga iyo hooyaday; xitaa ma rabin inay ka hadasho. Waxay tiri wax walba madaxeyga ayey kujiraan, inaan fiicanahay. 1993 iyo 1994 noloshayda kuma wanaagsaneyn. Ma aanan faraxsanayn. Hooyaday marwalba way xanuunsanayd, marwalba sariirta ayey qufacaysaa, marwalbana waxay aadeysaa CIGNA si ay daawo u hesho, had iyo jeerna wey daalan tahay. Hooyaday mar dambe isku hooyo ma ahayn; madaxaygu wuu xanuunayaa oo banaanka ayaan u taaganahay, waanan ku daalay inaanan hooyaday dhibin maadaama aan arkay sida ay u jiran tahay. Marwalba way murugaysanayd, marwalba way ooyi jirtay, mar walbana way murugootay oo qufacaysay Waxaan ku qaylin lahaa iyada inay xirto habeenka oo kuligeen way naga ilaalisay, hada waxaan dareemayaa xumaan.
Bishii Febraayo 1994, waan murugooday, madaxa ayaa i xanuunay, waxaanna kaniiniyada ka qaatay kabadhada daawada, ma ahayn markii ugu horeysay ee aan sidan sameeyo, laakiin hooyaday way xanuunsanaysay xitaa ma aysan ogaan. Waqti kasta oo aan waxbadan qaato iyo maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyaday u soo gashay inay i toosiso oo aanan kici jirin, aad ayaan u daalay. Hooyaday ayaa tiri taas waaye, labis; waxaan u soconnaa isla markiiba CIGNA. Halkaas ayaan aaday oo dhaqaatiirta CIGNA ayaa i arkay. Waxay ii direen meel caafimaadka maskaxda ah labadan meelood midkoodna xitaa ma oga waxa aan sameeyay. Hooyaday way igu soo socodsiisay waxaanan u sheegay wixii aan xayeysiiyay. Gelinkii dambe ee maalintaas ayay tidhi sidee bay u noolaan kartaa haddaan dhinto. Hooyaday way ooysay sababtoo ah way daalantahay waxay eedeysay nafteeda maxaa yeelay waxbadan kama qaban. Hooyaday waxaan u sameeyay balanqaad inaanan markale sameyn doonin. Hooyaday ayaa wacday CIGNA waxayna ka xanaaqday sida ay ugu hungoobeen inay arkaan waxaan isku dayay inaan naftayda dilo, waxaan waydiiyey nooca dhakhaatiirta ay ahaayeen. Hooyaday aad ayey u qaylisay waxay ku heshiiyeen inay i siiyaan jimicsi dhameystiran. Jidhka horraantii Maarso, aad ayaan uga cawannay madaxayga waxay isku raaceen in baaritaanno lagu sameeyo madaxayga. Tani waxay socotay qiyaastii laba bilood iyo badh, hal scan midba kan kale, ugu dambayntiina dhakhtarku wuxuu yidhi waxaan u baahanahay in sanka la iga maydho, taasi waxay ahayd dhammaadkii Maajo. Hooyaday ayaa weydiisay inay tani degdeg tahay, ma waxay u baahnayd in isla markiiba la sameeyo, dhakhtarka ayaa ku jawaabay ma ahayn mid degdeg ah. Hooyaday ayaa tiri waxaan sameyn laheyn fasaxa xagaaga.
Laga soo bilaabo Maajo ilaa Ogosto, hooyaday aad ayey u xanuunsatay. Waxay u tagtay dhaqtarka waxayna dul dhigeen naafonimo mudo 6 todobaad ah. Bartamihii bishii Luulyo, waxaan ku riyooday in hooyaday ay qabto kansarka sanbabada oo ay dhimanayso. Hooyaday aad bey u xanaaqday markaan waxan ku iri. Bilowgii Ogosto, hooyaday waxay ii dirtay Ireland muddo hal bil ah si aan u soo booqdo ayeeyaday iyo ayeeyaday. Markii aan ka soo noqday Ireland dhamaadkii bishii Ogos, gurigeena buuq baa ka taagnaa, mudo 2 todobaad ah CIGNA way diiday inay hooyaday siiso dhamaan raajooyinkeeda iyada oo u sheegaysa inay lumeen. Iyadu hadda ayey heshay oo waxay muujisay inay qabto kansarka sanbabada ku dhowaad 2 sano. Hooyaday qaliin ayaa lagu sameeyay 20% sambabka ayaa laga saaray. Waxay lahayd buro kansar ku dhaca. Markii ay hooyaday ku jirtay cisbitaalka, dhakhtarka qalliinka wuxuu u sheegay aabbahay in aanu sidoo kale fiicnayn. Waxay ku dhammaatay in CIGNA ay diiday inay sii deyso diiwaanka aabbahay illaa 2 toddobaad. Markii ay u tageen dhakhtar dibadeed, CIGNA ayaa ka daweyneysey cudurka neefta; runtii wuxuu hayaa kiis aad u horumarsan oo ah COPD waxuuna ku lahaa sambabka bidix wax sidii hooyaday yeelatey.
Waan tagnay oo waxaan helnay diiwaanka qoyskeena oo dhan. Markii aan aragnay tayda, oo aan aadnay dhakhtar dibadeed, kadib markii aan dibada u baxnay dhakhaatiirta waxaan ogahay imika waxa ku kala duwan dhakhtarka dhabta ah iyo dhakhtarka CIGNA, waxaanan rajaynayaa in maalin uun aan ka warami doono intaas oo dhan . Dhibaato ayaan ku qabay halka lafta la burburinayo, halkaasoo lafta ay ka dhex riixeyso wareegga, dhakhtarka ayaa yiri ishayda waa la riixi lahaa. Qaliinkaygu wuxuu ahaa Cedar-Sinai. 1995 aad ugama fiicna 1993 maadaama ay umuuqato inaysan jirin cadaalad dhamaan waxyaabahan ay CIGNA nagu sameysay. Waxaan dooneynaa inaan sharciga wax ka bedelno sidaa darteed qofna weligiis sidan oo kale uguma silci doono. CIGNA waxay ku xad gudubtaa qoyskeena ilaa maanta. Waxay hooyaday ka ooyaan saacado badan waxaanan rajaynayaa inaad ii oggolaan doontid inaan sidoo kale tan oo dhan kaaga warramo. CIGNA sidoo kale waa inay ogaataa haddii waalidkay dhintaan, halkee baan aadi doonaa, maxaase ku dhici doonaa walaalkay iyo walaashay? Anigu waxaan ahay Mareykan, markaan weynaadana ma doonayo inaan halkaan ku noolaado. Waxaan rabaa inaan u dhaqaaqo meesha dadku wanaagsan yihiin oo naxariista leeyihiin. Waxaan u guuri doonaa Ireland.
Hadda waxaan ahay 27 Sano. Si kastaba ha noqotee waa wax laga xumaado in qoys kasta ay ku dhici laheyd in sidan oo kale loo dhibaateeyo, oo qayaanoolayaashan iyo khiyaanooyinkan ayaa ka baxsaday ciqaab Gobolka California.
WAAD MAHADSAN TAHAY CIGNA GLENDALE
Mar 11, 2008 at 2: 58 AM
Sharciyada Markhaatiga Markhaatiga Go'aan Go'an Gobolka California ee Monday Monday May 12, 1997 at 2.03PM
Waxaan u imid inaan kula wadaago waayo-aragnimadayda. Waaxda Shirkaduhu waxay ku guuldareysanayaan shaqadooda sharciyeynta, iyo khibradeyda qoyskeygu waxay muujinayaan taas. Iyo khibradeyda shaqsiyadeed ee Cigna Healthcare waxay muujineysaa sida macaamiisha loogu xadgudbo, iyo sida Waaxda Shirkaduhu indhaha uga laabanayaan.
Khibradeyda Cigna waxay ka bilaabatay xadgudubka waalidkey, markiisana waxay ku xad gudbeen xadgudubkaas qof walba oo ka tirsan qoyskeyga. Markii aan xanuunsanayay ee aan u baahdo dhakhtar way ii diri jireen balan, waana la i dulayn lahaa maxaa yeelay inta badan dhakhtarka meesha ay ii direen ima filayn. Sidaas darteed Cigna wuxuu ii soo diray warqad uu ku sheegayo inaan dooran karo takhtar ii gaar ah iyaguna ay bixin doonaan kharashka daryeelka caafimaad. Tani waxay sameeyeen halmar hadana may bixin kharashka daryeelka caafimaadka, waxaana iigu hanjabay hay'adaha aruurinta in laygu dacweyn doono hadii aanan bixin biilka. Cigna waxay kaloo tiri waxaan ka dooran karaa dhaqtar aan doorto meesha aan daganahay Santa Barbara, tanina waligeed ma dhicin. Cigna waxay ii xilsaartay dostor ka Santa Barbara laakiin markii aan xanuunsanayay oo aan doonayay inaan balan qabsado waxaan wacay dhaqtarka waligey iguma soo celin wicitaanadayda. Markii aan la xiriirnay xafiiska dhakhaatiirta waxay yiraahdeen mar dambe lama shaqeynin Cigna, maxaa yeelay Cigna ma sameyn doonto tixraacyo marka takhasusle loo baahdo.
Sannadkii hore waxaan u baahday daryeel gaar ah, intii hawsha lagu guda jirayna dhakhtarku wuxuu yidhi waxaan u baahanahay Biopsy. Waxay ahayd inuu dhexda istaago oo uu oggolaansho ka helo CIGNA si uu usii wado. Dhaqtarka ayaa sheegay in labada qaliin ay iskuxiran yahiin waligiisna aan laga fileyn inuu sidan oo kale daawo uqabto. Nidaamkan ka dib markii aan u dacwooday Waaxda Shirkadaha ee ku saabsan Cigna waa diiday eedeymaha waxaanan ku jawaabay in dhakhtarku qalday. Tan iyo wakhtigaas dhakhtarku wuxuu u yimid Sharci dejiyehiisa Santa Barbara wuxuu cadeeyay inuu sameeyay Biopsy bilaa ogolaanshahooda, xisaabtayduna dhacdadu way saxnayd. Dhakhtarku wuxuu yiri waxaan ubaahanahay dabagal 90-kii maalmoodba mar maadaama tani ay ahayd xaalad hore oo kansar ah. Cigna waxay tiri hadii aan ubaahanahay daryeelkan takhasuska ah waxaan ubaahanahay inaan maro dhakhtarka daryeelka aasaasiga ah si aan u hubiyo inaan u baahanahay, iyaguna iyaguna waxay ii xilsaareen Dhakhtar daryeel aasaasi ah oo ku yaal Santa Maria, xitaa isku degmo, iyo in ka badan saacad hoygayga
Waxaan ahay arday waxaan aadaa UC Santa Barbara, mana haysto gaadiid. Maaha wax la aqbali karo., Waaxda Shirkaduhuna halkii ay i caawin lahaayeen, qofkii jooga Cigna ee mas'uulka ka ahaa dhibaateynta iyo carqaladeynta daaweynta ayaa mar kale i soo wacay.
May 12, 2008 at 8: 38 PM
Ka dib markii aan dhawaan la qaatay United sannado badan shirkadaydu waxay u wareegtay CIGNA.Waxaan dhawaan u baahday in MRI dhabarkayga la saaro oo waxaa ii sheegay DR.s SEcretary CIGNA inay aad ugu xun tahay oggolaanshaha wax kasta. Waxay qaadatay 5 maalmood in la oggolaado, laakiin Kaliya kadib markii dhaqtarkaygu si macno leh u dawarsado.Waxaa sidoo kale la ii sheegay xitaa hadii ay ogolaadaan habraacyada, mararka qaarkood way soo jeestaan ​​oo way diidaan iyaga oo sheegaya in aan loo idmanaynin qeexitaanadooda, hadana waad ku dhegan tahay biilka. wicitaan ka imanaya CIGNA tonite si loo arko haddii aan xiisaynayo in aan ugu yeedho “NURSADDO” dhibaatooyinka sanbabada, wadnaha, dhabarka, ama lafta mustaqbalka halkii aan u tagi lahaa takhtarkayga PCP !! Waxaan u sheegay inaanan ku raaxeysan doonin in laygu arko "taleefanka oo aan u mahadnaqo si kasta oo ay tahay. Aad ayey uga xanaaqday dhawaaqeeda kama aanan boodin dalabkii.
Aad ayaan uga baqayaa wixii arrimo caafimaad ah ee mustaqbalka ah ee aan u baahanahay in wax laga qabto gaar ahaan waxaan haystaa 7 jir, CIGNA waxay umuuqataa shirkad aan dan ka lahayn ka dib markaan aqriyo faallooyinka, kaliya waxaan ku duceysan karaa inaan dhammaanteen caafimaad qabno, maxaa yeelay CIGNA waxay u socotaa dinaar ma ahan samir !!!! Tan waxaa la ii cadeeyay 1 usbuuc kaliya !!!!!!!!!!!
Oktoobar 1, 2008 at 6:18 PM
Waxaan u shaqeeyaa shirkado diyaaradeed oo waaweyn oo leh cigna. dhabarka ayaan ka jabay shaqada, shaqada, saacad ayaan ku jiraa. Maamulahan laalaada ayaa ii sheegay in kani aanu ahayn "SHAQA SHAQADA"
Waxaan waayey 'indhahayga "naafonimo muddo dheer ah" thna cigna. sifiican, iyagu - cigna waxay iisoo direen dhillanad jireed oo noogu sheekeysay cigna waxay rabaan inay maqlaan. sidaa darteed, waxaan dhabarka u jiifayaa caawimaad la'aan iyo xanuun aan dakhli lahayn. yaa leh jawaabta iyo hadii uu jiro qof raba inuu lambar taleefan soo waco, maxaa yeelay waxaan ahay dadka maraya lacagta waana inaan hayaa lambarro aan waco, dhammaantoodna ma caawin laakiin wiilku miyay leeyihiin lambarro taleefanno !!
xiritaanka, dhunkaday dameerkeyga kuwa ku khuseeya, kuwa aan ku habboonayn, waan ka xumahay xanuunkaaga iyo noloshaad lumisay
Oktoobar 7, 2008 at 1:14 PM
Hooyaday way dhimatay muddo 11 sano ah Cigna waa caymiskii ay haysatay markay ku jirtay cisbitaalka hargabka. Muddo gaaban ka dib way ka sii dartay intii ay cisbitaalka ku jirtay laakiin halkii aan ka heli lahayn daaweyn fiican ayaa waxa na soo booqday haweenay ka hawl gasha cisbitaalka oo hooyaday iyo aniga u sheegtay in ay tahay in aan guriga aado maxaa yeelay Cigna lacag ma bixinayso mar dambe oo ay sii joogto. Hooyaday waxay ahayd 55 sano jir markii Cigna ay ka saartay isbitaalka. Maanaan ogeyn laakiin Cigna oo ahayd inay ogaato diiwaanada caafimaad dartiis waa in loo diraa nooc kasta oo lacag bixin ah oo cisbitaalka la siinayo oo ah in hooyaday caloosheeda calooshu ku dhegtay mindhicirkeeda waana sababta ay u dhiig baxaysay malawadka oo ay awoodi wayday iskeed u istaag markii loo sheegay Cigna waxay sheegtay inaysan bixin doonin wax lacag ah oo daaweyn ah. Hooyaday waxay uso noqon doontaa usbuucaas gudaheeda oo ay aad ugu xanuunsantahay dhiiggooda ma qaadi karaan maxaa yeelay wey dhimaneysaa isla markaa waa la galiyay ICU ka dibna waa markaan ogaanay inay caloosheeda ku dhegtay xiidmaha waxay u baahnaan doontaa qalliin laakiin maadaama oo aan dhaqso loo fasixin waxaa loo furay inay ku dhacdo dhammaan xiidmaheeda mindhicirka oo kaliya fadhida meesha maxaa yeelay hooyaday ma ogeyn inay tan leedahay laakiin Cigna waxay sameysay markii ay ka saareen isbitaalka. Kadib waxaa la saaray taageerada nolosha oo wax ka yar 7 maalmood kadib 18 maalmood ka hor intaanan gaarin 21years waa inaan u saxeexaa hooyaday in laga qaado kaalmada nolosha sababtoo ah rajo kama jirin sababo la xidhiidha sida ugu dhakhsaha badan ee uu cudurka ugu faafay intii ay jirtay isbitaalka ka baxsan. Ugu yeer waxa aad jeceshahay laakiin waa dil markii lacag ama caymiska saxda ahi hooyaday sii noolaan lahaayeen laakiin maadaama ay haysatay CIGNA HMO waxay go’aansadeen inaysan u qalmin bixinta. Weli 11years ka dib weli waxaan la yaabanahay inta kale ee ku dhimatay gacmahooda.
Jun 21, 2009 at 3: 10 PM
Jo Joshua Godfrey oo ku xanuunsaday gacanta sigaarka ayaa aasaasay United Patients Of America.